Kaaliyaha Google: Lenovo Smart Display ee iibinta Faransiiska laga bilaabo 179 € - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Kaaliyaha Google: Lenovo Smart Display ee iibinta Faransiiska laga bilaabo 179 €
Hal sano ka dib markii la soo saarey, Lenovo Smart Display ugu dambeyntii waa laga iibsaday Faransiiska. Tani waa kormeerka ugu horreeya "smart screen" oo leh Kaaliyaha Google ee laga heli karo Hexagon. Shaashadu waxay ka jawaabeysaa codsiyada "OK Google" waxayna kuu ogolaaneysaa inaad daawato YouTube iyo wicitaano video ah leh Google Duo.
Waxay u egtahay kiniin aan ka dhaqaaqin meeshiisii ​​oo ay ku qalabeeysan tahay xannaanad weyn oo 10 W ... oo aan ku xirneyn wax dalab ah, nidaamka deegaanka wuxuu ku kooban yahay Kaaliyaha Google (yaa yaqaan xakamaynta walxaha ku xiran) iyo barnaamijyada lammaanaha
Shaandhaynta Lenovo Smart ayaa lagu taagi karaa horjooge ama vertical ahaan. Waxaa lagu qalabeeyaa daboolid si looga hor istaago kamaradada iyo badhanka in la xiro makarafoonka, kaliya haddii ay dhacdo.
Qalabka waxaa lagu heli karaa 8 "HD ama 10" Full HD version. Nooca ugu horeeya wuxuu ku baxayaa 179 € iyo labaad 239 €. Waxay ku jiri doontaa horaanta laga bilaabo berri, April 5, on Lenovo.com iyo Fnac. Wax soo saarka waxaa la qorsheeyay April 15.
Dib u cusbooneysiiyay April 5: Ka soo horjeeda waxa lagu qorey bilawga qodobka, sheygani maahan midda ugu horeysa ee Smart Display ee laga helo Faransiiska. Tan iyo sanadkii hore Archos ayaa bixisa a range of Hello.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.igen.fr/domotique/2019/04/google-assistant-le-lenovo-smart-display-en-vente-en-france-partir-de-179-eu
Snapchat wuxuu hadda u ogolaanayaa inuu ku sheekaysto sheekooyinka ku saabsan Tinder